ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်(အာရှ) မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဤဆောင်းပါးကို ဝီကီစံနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် လိုအပ်နေသည်။ အကယ်၍သင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါက ဤဆောင်းပါးအား တိုးတက်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ပေးပါ။ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာတွင် အကြံပေးမှုများ ပါဝင်လိမ့်မည်။(4 April 2017)
ကိုဩဒိနိတ်: 42°00′N 43°30′E﻿ / ﻿42.000°N 43.500°E﻿ / 42.000; 43.500
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိသော ဒေသကို အစိမ်းရင့်ရောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြေညာထားသော်လည်း ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဒေသကို အစိမ်းနုရောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
တဘီလစ်ဆီမြို့ 41°43′N 44°47′E﻿ / ﻿41.717°N 44.783°E﻿ / 41.717; 44.783
Abkhazian (Abkhazian Autonomous Republic)
—၈၃.၄% ဂျော်ဂျီယာ အော်သိုဒေါ့
၁.၂% အခြား / ဘာသာမဲ့
• en:Colchisနှင့် Iberia
ဘီစီ ၁၃ – ၅၈၀ အေဒီ
• အက်ခါဇီးယားဘုရင့်နိုင်ငံ နှင့် ဘက်ဂရတ် အိုက်ဘေးရီးယား
• ပေါင်းစည်းထားသော ‌ဂျော်ဂျီယာဘုရင်နိုင်ငံ
• သုံးပွင့်ဆိုင် ပိုင်းခြားခြင်း
၁၈၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်
• ရုရှားအင်ပါယာထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခြင်း
၁၉၁၈ ခုနှစ် မေလ ၂၆ ရက်
• တပ်နီတော် ကျူးကျော်မှု
၁၉၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်
• ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခြင်း
၁၉၉၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၉ ရက်
၁၉၉၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်
၁၉၉၅ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၂၄ ရက်
၆၉,၇၀၀ km2 (၂၆,၉၀၀ sq mi) (အဆင့်: ၁၁၉)
၄,၀၁၂,၁၀၄ [b] (အဆင့် - ၁၂၈)
၅၇.၆/km2 (၁၄၉.၂/sq mi) (အဆင့် - ၁၃၇)
$၄၆.၀၅ ဘီလီယံ[a] (အဆင့် - ၁၁၂)
$၁၂,၄၀၉[a] (အဆင့် - ၁၀၁)
$၁၇.၈၃ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၁၈)
$၄,၂၈၅[a] (အဆင့် - ၁၀၇)
အလွန်မြင့် · ၆၁
‌ဂျော်ဂျီယာ လာရီ (₾) (GEL)
ဂျော်ဂျီယာ စံတော်ချိန် GET (UTC+4)
ဂျောဂျီးယားနယ်တွင် အများအားဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် လက်ဖက်၊ ပြောင်း၊ ဆေးပင်၊ ပိုးစာပင်၊ စပျစ်သီး၊ ဝါဂွမ်းများကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ သဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းများစွာ ရရှိ၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မန်ဂနိ အများဆုံးထွက်ရာဒေသ ဖြစ်သည်။ အဖိုးတန်သစ်တောကြီးများ ရှိသော်လည်း သစ်လုပ်ငန်းကိုကား ကောင်းစွာ မလုပ်ကြသေးချေ။ ဆိုဗီယက်အစိုးရ၏ ကြီးမှူးဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့် ရေအားဖြင့် ခုတ်မောင်းသော လျှပ်စစ်စက်ရုံကြီးများ တည်ဆောက်၍ သဘာဝပစ္စည်းများကို တူးဖော်ရာ၌ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ ဂျောဂျီးယန်းဘာသာစကားကို တောင် ဘက် ကော်ကေးကပ်နယ် အားလုံးလိုလို၌ပင် ပြောကြ၍ ယခုအခါ ရုံးသုံးဘာသာစကား ဖြစ်လာလေပြီ။ ဂျောဂျီးယန်းလူမျိုးများသည် ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပကြသည့်အပြင် ကစားခုန်စား၌ လည်း ထူးချွန်ကြပေသည်။
အက်ဘ်ခါဇီယာဒေသက လွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်နှင့် အထက်ပါဖြစ်ရပ်တို့ကို အကြောင်းပြု၍ ဂျော်ဂျီယာခေါင်းဆောင် ရှီဗာနာဇေသည် ၎င်းအားဆန့်ကျင် အတိုက်အခံပြုသူများအား ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် စစ်ကြေညာခဲ့သည်။ ဂျော်ဂျီယာ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များကိုလည်း အက်ဘ်ခါဇီယာဒေသသို့ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အက်ဘ်ခါဇီယာဒေသ အာဏာပိုင်များကလည်း ဤသို့ ဂျော်ဂျီယာတပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်မှုကို ကျူးကျော်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရှုတ်ချကြသည်။ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်မှ ၁၆ ရက်အတွင်း အက်ဘ်ခါဇီယာဒေသ မြို့တော် ဆူခူမီ၌ ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများတွင် လူ ၅၀ ကျော် သေဆုံး ခဲ့ရသည်။
ဂျော်ဂျီယာ ပါလီမန်ကလည်း ရုရှားတပ်ဖွဲ့များ လုပ်ရပ်အတွက် ရုရှားအစိုးရတွင် တာဝန်အပြည့်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ အက်ဘ်ခါဇီယာဒေသမှ ရုရှားစစ်သားများ မရုပ်သိမ်းပါက ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံအနေဖြင့် စစ်တပ်ဖွဲ့များစည်းရုံး စုစည်းခြင်း ပြုရလိမ့်မည်ဟု ရှီဗာနာဇေက ခြိမ်းခြောက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အက်ဘ်ခါဇီယန်တပ်ဖွဲ့များ မြို့တော် ဆူခူမီအနီးရှိ အချက်အချာကျသည့် ကျေးရွာနှစ်ရွာမှ ဆုတ်ခွာသွားရန်နှင့် မြို့တော် ဆူခူမီကို တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရန် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက် နေ့တွင် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံက ရာဇသံပေးခဲ့သည်။ လိုက်နာခြင်း မရှိပါက အက်ဘ်ခါဇီယန်တို့၏ ဌာနချုပ်စခန်းတည်ရှိရာ ဂူဒေါတာကို အလုံးအရင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ရလိမ့်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
↑ "Article 8"၊ Constitution of Georgia . In Abkhazian Autonomous Republic, also Abkhaz language.
↑ Constitution of Georgia။ 10 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგები။ National Statistics Office of Georgia (28 April 2016)။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Demographic Portal။
↑ 2014 General Population Census Main Results General Information — National Statistics Office of Georgia။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ World Economic Outlook Database, October 2019။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ World Economic Outlook Database October 2019။
↑ GINI index (World Bank estimate) - Georgia။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်။
↑ Human Development Report 2020 (in en)။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်။
↑ စွယ်စုံကျမ်းနှစ်ချုပ်၊ (၁၉၉၄)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ&oldid=703779" မှ ရယူရန်